Hogaamiyeyaasha Caalamka ayaa sanadkan yeelan doonin kullanka guud ee Qaramada Midoobe | Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed
Hogaamiyeyaasha Caalamka ayaa sanadkan yeelan doonin kullanka guud ee Qaramada Midoobe
Tanzania(SONNA)-Guddoomiyaha Golaha loo dhan yahay ee Qaramada Midoobe, Tijjani Muhammad-Bande ayaa isniinta shalay ahayd sheegay in hogaamiyeyaasha caalamka aysan magaalada New York u tagi doonin ka qayb galka shirka sannad laha daba-yaaqada bisha September markii uga horeysay 75 sano oo laga jooga dhismaha QM sababa la xiriira cudurka saf-marka ah ee Covid-19.
Waxa uu sheegay in labada asbuuc ee soo socota uu ku dhawaaqaya sida 193 madax dawladeed ee ay u jeedinayaan khudbadahooda maadaama aysan suura-gal ahayn in wafdi badan ay tagaan Magaalada New York ee dalka Mareykanka.
Antonio Guterres, Xoghayaha Guud ee QM ayaa bil ka hor ku taliyey in khudbad hore loo duubay uu ka jeediyo xubinta diplomasi fadhigiisa yahay New York kaliya uuna ka jeediyo hoolka xarunta.
Gollahan ayaa isu keeni jiray kumanaan mas’uuliyiin dawladeed, diplomasiyiin iyo wakiilo ka kale ka socon jiray ururada bulshada, waxana dhici jiray asbuuc hadal jeedin ah, iyo kullamo kale,balse sanadkan ayaa suura-gal in 100 wakiil kaliya ay madashaas xaadirto.
June 26 bishan ayaa sidoo kale golaha u bilaan lahayd dabaal dega markii ururka la dhisay 1945 oo laga jooga 75-sano, balse Coranavirus awgiis ayey u baaqanayaan.
Previous articleGuddoomiyaha Maxkamadda Sare ee Dalka oo tababar u furay garsoorayaal cusub
Next articleGudoomiyaha Gobolka Hiiraan oo ka hadlay dagaalo ka dhacay deegaano hoos tago Gobolka Hiiraan.